Fitantanana ny Faharetana ara-tsosialy | Reef Resilience
Mitombo hatrany, ny fitantanana ny haran-dranomasina dia mikendry ny hiaro tsy ny fahasamihafan'ny zavamananaina, fa koa ny fitazonana ny fanomezana tolotra momba ny tontolo iainana ho an'ny fiarahamonina. Na izany aza, maro amin'ireo fanapahan-kevitra momba ny fitantanana dia misy fifampiraharahana, na eo amin'ny tanjona ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy, na eo amin'ny soatoavina ara-tsosialy na sehatra samihafa. Ny fahatakarana ny fiantraikan'ny safidy samihafa amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny indostria miankina amin'ny vatohara dia lasa tanjona lehibe ho an'ny mpitantana ny haran-dranomasina.
Mpanjono maka ny haratony any Indonezia. Sary © Kevin Arnold
Tombano ny fiantraikan'ny fiovan'ny tontolo iainana sy andrim-panjakana (fitsipika, politika, sns.) ho an'ny vondrom-piarahamonina sy sehatra miankina.
Afaka mandray soa avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpahay siansa sosialy ny mpitantana ny haran-dranomasina amin'ny famolavolana sy fampiharana ny fandaharan'asa momba ny fiarovana ara-tsosialy. Ny fahafantarana ny faharetana ara-tsosialy sy ny fitaovana mifandraika dia afaka manampy ny mpitantana hampiditra ny fiheverana ara-tsosialy amin'ny programa fitantanana
Misy loharanon-karena isan-karazany hitarihana ny ezaka amin'ny fananganana ny fiaretana ara-tsosialy. Anisan'izany ny fitaovana hanombanana sy fanaraha-maso ny toe-piainana ara-tsosialy, toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSocMon, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSLEDmanokatra fisie PDF , Fitaovana ho an'ny fahatakarana ny ara-tsosialy sy ny fanombanana marefo fahavononantsika ref ary torolalana amin'ny fijerena ireo safidy fampifanarahana. ref
Fanombanana sy fitantanana faharetana amin'ny rafitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainanamanokatra fisie PDF
Hatraiza ny faharetan'ny vondrom-piarahamoninao amoron-tsiraka?manokatra fisie PDF
Rindrambaiko ho an'ny fampifanarahana ara-tsosialy amin'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF